Ogaden News Agency (ONA) – Imran Khan oo Ku Guulaystay Doorashadii Pakistan.
Imran Khan oo Ku Guulaystay Doorashadii Pakistan.
Posted by ONA Admin	/ July 28, 2018
Ku dhawaaqistan ayaa timid saacado kadib markii Khan uu sheegtay in xisbigiisa PT uu ku guuleystay doorashada. Khudbad laga sii daayey taleefishinka oo uu guushiisa ugu dabaal-dagayey ayuu Khan ku ballan-qaaday inuu wax ka qaban doono musuq-maasuqa, isaga oo is-beddel ku sameynaya habka maamul ee dalkaas.
Dhammaan xisbiyada la loo lamayey xisbiga Khan ee PT ayaa tuhunsan in codbixinta la musuq maasuqay, ayada oo loogu eexanayo Khan, eedeyntaas oo guddiga doorashada Pakistan uu beeniyey. Guddoomiyaha guddiga Sardar Mohammad Raza ayaa aad u difaacay hannaanka doorashada oo uu sheegay in 100% uu ahaa mid sax ah oo aan wax qalad ah ka dhicin.